WHAT IS THE BIBC? - Xhosa - The Building Industry Bargaining Council - BIBC
Eli Bhunga lilicandelo nommandla elakhiwe phantsi kwemigqaliselo ye-LRA. Lomthetho (LRA) ubonelela imibutho emele abaqeshi nabasebenzi ngenyoba yokungena kwizivumelwano zobambiswano nokuthetha ngazwinye. Ukuba lamaqela amele nokwaneleyo angarhweca uMphathi weMisebenzi ukuba azi-gazethe imvumelwano zibengumthetho zibophelele namaqela angekho kwimanyano.
Ummandla ocandiweyo wogunyaziso lomthetho ubandakanya isixa esingama-400 ezikwekhilomithara, uxande ukusuka e-Gordon’s Bhay ugudle iintaba ze-Hottentots Holland ukuya e-Malmesbury uquke wonke usingasiqithi ukuya kuthi xhaxhe ngencam yeKapa.
ISIVUMELWANO SETHU SOBAMBISWANO
Isivumelwano sichaka imigqaliselo neemeko zentsebenzo kwicandelo lokwakha kubandakanya imivuzo esisiseko neenzuzo (benefits). Konke oku kuxoxwa nyaka nonyaka kuthi kwakusayinwa uMphathi ukwenze umthetho kwi-gazethi kusukele kumhla wokuqala kaNovemba. Emva koko bonke abantu abakwicandelo lokwakha kummandla ocandiweyo webhunga banyanzelekile ukuba bathobele imigqaliselo yesivumelwano, besisayinile bengasisayinanga isivumelwano.
IMISEBENZI EMINE EPHAMBILI
Ukunika iqonga lothethathethwano olwakha Isivumelwano Sobambiswano (Collective Agreement) phakathi kwemibutho emele abaqeshi nabasebenzi nyaka nonyaka.
Ukulawula nokunyanzelisa Isivumelwano Sobambiswano kwicandelo lokwakha.
Ukusombulula zonke iimbambano zentsebenzo kwicandelo lokwakha egameni le CCMA.
Ukulawula iingxowamali zenzuzo yentlalontle yabasebenzi (umzekelo: umhlalaphantsi, uncedo lwamachiza, intlawulo yokugula kunye neyekhefu).
UBUNGAKANANI BEQELA LETHU
IBhunga liqulathe ooceba abali-20 abangesosigxina (part-time) (kuquka noMhlalingaphambili nesekela lakhe) abahlangana nyanga nenyanga. Imibutho yabaqeshi nabasebenzi imelwe ngokulinganayo kwiBhunga. Kukho uMlawuli oyintloko (CEO) kunye nabasebenzi abakwisithuba sama-90.
Nangona iBhunga lisisidalwa somthetho, alifumani nkxaso-mali kuRhulumente livuzwa ngemirhumo ebhatalwa ngokulinganayo ngabaqeshi nabasebenzi. Sinikinkonzo kwizidingo zabaqeshi abamalunga ne- 3500 nabasebenzi abamalunga 46000 yaye sisoloko sizama ukunika iinkonzo kwiqondo eliphezulu ngokungephi.
KUTHENI KUFUNEKA UBHALISILE UTHOBELE NOMTHETHO NJE?
Ukuthobel’umthetho kuthetha ukubhalisa njengomqeshi kwi-Bhunga, ubhalise abasebenzi abatsha ethubeni lentsuku ezingama-60 yaye ubhatale imivuzo neenzuzo ezisisiseko. Umqeshi ongabhalisanga okanye okwimbambano neBhunga akayi kuthatyathwa njengothobeleyo. (Inkcanabo yenkcukacha zokuthobela idweliswe kwi-webhsayiti yethu).
Baninzi abaqeshi apha kwelicandelo abagunye ngesiko lokungathobeli. Ikwangaba bantu banye abambomba ngokuba abanyanzelekanga ukuba babhalisele imirhumo ye-teksi (Income Tax), VAT, PAYE, UIF, RSC kunye ne-OHSA. Ukudela umthetho wokuhlala kungaba kwakwamkelekile ngaphambili, kodwa kunganzima ukuba kwamkeleke kuloMzantsi Afrika mtsha. Namhlanje kwenza isongo ukuthobel’umthetho kuba iinyhweba zisadulisa imingcipheko.
IBhunga lidlen’indlebe ngezindululo kunye namasebe kaRhulumente namaqumrhu abucala athi abenoxanduva lokunikezela izivumelwano zemisebenzi yecandelo lokwakha, ukuze ibe ngabaqeshi abathobelayo kuphela abanokuxhamla kulomisebenzi. Le nkqubo iyaqhubeka ngokukhula.
Abaqeshi abathobelayo banemigushuzo yokungonwabi kwingqesho ekwiqondo eliphantsi njengoko imivuzo ixoxwa ngokumanyeneyo. Abasebenzi bayayazi ukuba babhatalwa ngokwamanqanaba ecandelo.
Ngabaqeshi abathobelayo kuphela abadweliswe kwi-webhsayiti yethu. Abakhuphi bomsebenzi kunye neekontraka ezinkulu zisebenzisa olu ludwe ukukhetha iikontraka ezithi zifuman’umsebenzi.
Amagosa ethu obudlelwane bentsebenzo (agents) anika iingcebiso noqeqesho phambi kokuba ugaxeleke kwiingxaki kuquka nosombululo lwembambano olukhawulezayo.
Sinamaqugula (seminars) esiwabambayo nyanga nenyanga kwizihloko ezidlumzi kwicandelo lokwakha.
Abasebenzi ababhalisiweyo kwiBhunga bajizwe ngeenombolo ezizezabo (“holiday fund” numbers) eziqinisekisa ukuba bafumana iinzuzo zabo ezilungileyo – ngaphandle kokuxhomekeka kwinto abayiva kumqeshi wabo.
IBhunga lilawula iingxowamali zenzuzo ezine, ngendleko engephi, zecandelo lokwakha – ipenshini, uncedo lwamachiza, iintlawulo zokugula kunye neentlawulo zekhefu. Ezingxowa zilungiselelwe icandelo lokwakhwa kwaye akukho mfuneko yokuzifunela ezizezakho.
Sinayo nenkonzo yolungiso lwemivuzo elungiselelwe osomashishini becandelo lokwakha ngamaxabiso ancomekayo. Iquka nengxelo enobucukubhede bendawo elungiswe kuyo imivuzo yaye sele isetyenziswa ziinkampani ezinga-39, abasebenzi xa bebonke babe ngama-2000.
Ukungathobeli kungabonakala kungenandleko kunokuthobela, kodwa kululwaphulomthetho.
Onobumba abangathobeliyo abayi kuwufumana lula umsebenzi kwikontraka ezinkulu njengoko zithi zibotshwe ngebhantinye xa kusohlwaywa ukungathobeli.
Xa ubanjiwe, ii-fayini kunye nezohlwayo zingazindleko
Abanye abasebenzi bakhetha imali ezinkozo kunenzuzo ze-penshini, ikhefu okanye intlawulo yokugula, bejonge phambi kwamehlo abo hayi ingomso.
Ngenxa yentswelangqesho ephakamileyo, abasebenzi abangabhaliswanga basoloko befumaneka ngemivuzo engaphantsi kwesiseko, kodwa ke ingaba obo bubulumko okanye ukungabinaxanasi?
08h00 to 16h00 uMvulo ukuya ngoLwesihlanu
08h30 to 11h00 kuMgqibelo wokuqala kwinyanga nganye
Ifowuni: 021 950 7400
i-Fax: 021 950 7405
Ifowuni: 021 872 1505
i-Fax: 021 872 2301
09h00 to 13h00 imiVulo noLwezithathu kuphela
141C Main Road
(Entrance off Oak Road)
Ifowuni: 021 851 2160
Ukuphumeza uzinzo kubudlelwane bengqesho kunye nokhuphiswano loqoqosho olungenamkhethe kwicandelo lokwakha